Medical Writings ဆေးပညာစာများ: MDR-TB ဆေးယဉ်တဲ့ တီဘီ
MDR-TB ဆေးယဉ်တဲ့ တီဘီ
Multi-drug-resistant tuberculosis ဆိုတာ တီဘီအတွက်အများဆုံး (အကောင်းဆုံး) သုံးနေတဲ့ ဆေး ၂ မျိုးဖြစ်ကြတဲ့ Isoniazid (INH) နဲ့ Rifampicin (RMP) တွေနဲ့ကုလို့မရတဲ့ တီဘီ ရောဂါကိုဆိုလိုပါတယ်။
• လူနာကသက်သာလာပြီ ဆေးမလိုလောက်ဘူးထင်ပြီး ဆေးရပ်လိုက်လို့၊
• ဆေးလုံလောက်အောင်မရနိုင်တာကြောင့် ဆေးရပ်လိုက်လို့၊
• ဆေးသောက်ဘို့ မေ့သွားလို့၊
• ဆေးဘယ်လောက်ကြာကြာပေးရမယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ခဲ့တာက ကာလတိုသွားလို့။
ပေးရမဲ့ဆေးတွေကို ဒုတိယတန်းစာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဈေးလဲကြီးတယ်။ မကုနိုင်လို့နေရင် ကူးစက်ပြန့်နှံ့ပြီး တခြား လူတွေပါ ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်။ ၂ဝ၁၃ မှာရထားတဲ့စာရင်းတွေအရ ၃့၇% တိုးလာတယ်။ ၂ဝ၁၁ တုံးက WHO ခန့်မှန်းချက်အရ လူနာပေါင်း ဝ့၅ သန်း ရှိနိုင်တယ်။ ဒုတိယတန်းစားဆေးတွေက ဆက်ပြီး ဆေးယဉ်တာလဲရှိတယ်။ XDR-TB လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။
Extensively drug resistant TB (XDR TB) ဆိုတာ Isoniazid နဲ့ Rifampin သာမက Fluoroquinolone နဲ့ Amikacin, Kanamycin, Capreomycin ထိုးဆေး ၃ မျိုးထဲက တမျိုးကိုဆေးယဉ်နေတာကိုသတ်မှတ်တယ်။ DOTS-Plus ဆိုတာ DOTS ရက်တို တီဘီဆေးကို အထူးပြုပြင်ထားတာဖြစ်တယ်။ တီဘီဆေးတွေနဲ့ ဆေးယဉ်-မယဉ် စမ်းသပ်မှုလုပ်ရတယ်။ INH နဲ့ RMP တွေကို ဆေးယဉ်တာသိလာရရင် ဒုတိယတန်းဆေးတွေထဲကနေ (၅) မျိုးကို ရွေးပေးမယ်။ ဆေးသုံးသင့်မှုရွေးသင့်တာကို အစီအစဉ်အတိုင်းက ဒီလိုဖြစ်တယ်။
1. Aminoglycoside (Amikacin, Kanamycin) သို့မဟုတ် Polypeptide (Capreomycin)
4. Fluoroquinolone = Moxifloxacin (Ciprofloxacin ကိုမသုံးပါ)
7. Thioamide = Prothionamide or Ethionamide
9. Macrolide = Clarithromycin
11. INH (High-dose)
နောက်ဆေးတွေထိရောက်မှုသိရအောင် Sputum cultures သလိပ်စစ်နေရမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် တလတကြိမ်။ ဆေးတွေကို အနည်းဆုံး (၁၈) လကြာပေးတယ်။ အတိအကျဆိုရင် သလိပ်မှာပိုးမတွေတာ ၉ လ ရှိတဲ့အထိပေးရတယ်။ တချို့က ၂ နှစ် အထိကြာနိုင်တယ်။ ဆေးရုံမှာကုသတာဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ရင် သီးခြားနေစေသင့်တယ်။ HIV ပိုးရှိနေသူတွေနဲ့ တခြားစီ ဖြစ်ရပါမယ်။
• V5 Immunitor
သိပ်ဆိုးနေသူတွေကို ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အဆုပ်နေရာကို ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်တာလုပ်ပေးမယ်။
မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ စောစောသိ၊ စောစောဆေးကုသမှုခံယူပါ။ ဆေးပါတ်လည်အောင် ကုသပါ။ HIV/AIDS ရှိနေသူတွေက ပိုသတိထားရမယ်။ မိသားစုဝင်တွေ၊ အတူနေသူကို ဆေးစစ်ရမယ်။ ဆေးသုတေသနတွေ ဆက်လုပ်ဘို့လိုတယ်။ ဆင်းရဲသူတွေမှာသာ အဲတာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ပါ။
Kyaw Thura Aung ကျေးဇူးပါဆရာ။ ကျနော်က PSI ( population service international ) နဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်နေတဲ့ General practioner တစ်ယောက်ပါဆရာ TB project တွေမှာလဲ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆေးပေးနေရတဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါဆရာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်၂၀လောက်က meeting တစ်ခုမှာ NTP (National TBcontrol Programme)မှာ MDR TB နဲ့ပတ်သက်ပြီး massages တွေတော်တော်လေးသိခဲ့ရပါတယ်ဆရာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနအနေနဲ့ MDR TB case တွေကိုအပြင်ဆေးခန်းတွေမှာ ကုသခွင့်လုံးဝခွင့်ပြုမထားပါဘူးဆရာ။
ဒါကလဲ XDR TB case တွေများလာမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် MDR TB treatment အတွက်ကုသချိန်၂နှစ်ဆိုတာလဲဟုတ်ပါတယ်ဆရာ စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ ၇ သိန်းလောက်ထိရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အခမဲ့ပါ။ အပြင်မှာ ကုခွင့်မပေးတာက MDR TB အတွက်သုံးတဲ့ ဆေးတစ်ချို့က ဈေးကွက်ထဲမှာလုံလုံလောက်လောက် မရနိုင်လို့ရယ်၊ နောက်ပြီ Guidline အတိုင်းအတိအကျ လုပ်ရတာမို့ရယ်ပါ။ ပြီးတော့ MDR TB တွေကိုကုတဲ့အခါ တရားဝင်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးမှ ကုရတယ်ပြောပါတယ်။ Complication များတယ်ပြောပါတယ်။ Liver, Renal, Electrolyte စတဲ့ laboratory monitoring တွေတစ်ပတ်တစ်ခါ ၂ ရက်တစ်ခါဆိုသလို လုပ်ရပါတယ်။ Psycological problem တွေလဲများပြီး၊ Sucidal tendency လည်း အရမ်းကိုတက်လာတယ်ပြောပါတယ်။
အပေါ်က လူနာရဲ့အသက်အနေအထားနဲ့ဆိုရင် complication တွေရှိဖို့များပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ လူထုထဲမှာ သလိပ်ပိုး (+++) နဲ့ MDRTB case တစ်ခုကို မကုဘဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ အန္တရာယ်များပါတယ်။ စောင့်နေရတယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အားနည်းချက်ပါပဲ။ ကျနော်သိတာလေးပြန် share တာပါဆရာ။